Ndị ọbịa gị achọghị ịmụtakwu ma ọ bụ gụkwuo | Martech Zone
Fraịde, Machị 1, 2013 Fraịde, Machị 1, 2013 Douglas Karr
Ọtụtụ mgbe, ndị ahịa na-arụsi ọrụ ike na ịnweta ọtụtụ okporo ụzọ nke na ha anaghị ewepụta oge iji meziwanye pasent ntụgharị nke okporo ụzọ ha nwetara. Izu a, anyi na-enyocha multi-aka email omume n'ihi na a ahịa nke Right On mmekọrịta. Onye ahịa ahụ setịpụrụ ụfọdụ mkpọsa dị ịtụnanya mana ọ tara ahụhụ site na ntinye ọnụ-ala na ntụgharị.
Anyị chọpụtara na email ọ bụla nwere njikọ ndị yiri ya na ha ejiri mee ka ndị debanyere aha ahụ gaa na saịtị ahụ:
Anaghị m emegide iji njikọ njikọ ederede dịka nke a, mana mgbe ejikọtaghị ha na teasers, uru, atụmatụ na echiche nke ịdị ngwa, ha agaghị enweta clicks ịchọrọ. Cheedị ma ọ bụrụ na njikọ ndị a agbanwee:
Guo otu ndi ahia anyi n’eme okpukpu atọ na-abawanye na arụpụta ihe. Bido ịhụ ka arụpụta ihe na abawanye na azụmaahịa gị ugbu a.
Mụta otu esi echekwa ihe anyị mfe integrates na ngwa gị ugbu a.
Na 2 nkeji, a dị ịtụnanya video ga-akọwa ihe mere i kwesịrị iji banye taa na- gbanwee NDỤ gị.
Oche na-agwụ, ịdenye aha maka ngosi taa na nweta akwụkwọ ntanetị anyị n'efu!
Uru na echiche nke ịdị ngwa nwere mmetụta dị ịtụnanya na ọnụego ịpịrị-ọnụego gị. Egbula ohere na email ma ọ bụ otu isiokwu iji nwekwuo pịa site na ọnụego. Ndị mmadụ achọghị mụtakwuo, GỤKWUO, ekiri or aha ọ gwụla ma ha maara na uru dị n'ime otú ahụ!
Mara: tohapụ ikwu na iji ụdị okwu ahụ jikọtara ya bụ njikarịcha dị oke egwu. Gbakwunye njikọ na asụsụ nkọwa na-akọwapụta ọdịnaya gị nke ọma maka engines ọchụchọ.
Tags: mụtakwuonjikọ ederedeGỤKWUOlezie anya ugbu a
Mar 2, 2013 na 12: 41 PM
Ka m na-agụ nke a post, e nwere ihe mgbasa ozi maka Marketpath na nanị na-ekwu “Mụtakwuo” 🙂
Mar 3, 2013 na 2: 46 PM
Na-akpa ọchị, @robbyslaughter: disqus! Enwere ohere iji kwalite CTA ahụ. Na nchebe ha, echere m na enwere otu uru na ebe ahụ - 'ọ dị mfe'.